बागलुङमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीन सय पुग्यो - नेपालबहस
बागलुङमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीन सय पुग्यो
| २०:४९:३१ मा प्रकाशित
२२ भदौ, बागलुङ । जिल्लामा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या तीन सय छ पुगेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या २७९ छ भने एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
आइसोलेशनमा रहेका संक्रमितको सङ्ख्या २६ छ भने क्वारेन्टिनमा ७२ जना छन् । पछिल्लो पटक आइतबार काठेखोला गाउँपालिकाका तीन जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । जिल्लामा पहिलो पटक गत चैत १५ गते कोरोना देखिएको थियो जुन नेपालकै पाँचौँ संक्रमणको घटना थियो । त्यसयता भारतबाट आएका अधिकांश व्यक्तिमा कोरोना देखिए पनि पछिल्लो समय समुदायमा संक्रमित भेटिन थालेका छन् ।
जिल्लामा अहिलेसम्म झण्डै सात हजारको पीसीआर परीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी बागलुङ नगरपालिकामा ५४ र सबैभन्दा कम तमानखोला गाउँपालिकामा सात जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
कोरोनाले शिक्षण अस्पतालकी कर्मचारीको मृत्यु, २०० स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित ! ५१ मिनेट पहिले
ओलीको प्रतिगामी तयारी नेता व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय टुक्र्याउँदै २ मिनेट पहिले
ब्रोइलर कुखुराका चल्लालाई रंग लगाएर लोकल भन्दै १५० रुपैयाँमा बिक्री ! ६ मिनेट पहिले
पढाइ शुल्क तिर्न नसक्दा मिस्त्रीको काम शुरु १७ मिनेट पहिले
युवतीको बलात्कारपछि विभत्स हत्या, शरीर खोलामा फालेर टाउको गायब ! २६ मिनेट पहिले
मास्क सिलाउन व्यस्त महिला ३६ मिनेट पहिले
कथा: कर्णकाे बयान ४६ मिनेट पहिले